जसरी पार्टी र सरकार चलाइएको छ यस्तो शैलीले जनअपेक्षा पुरा हुँदैन् - www.khabardabali.com | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more जसरी पार्टी र सरकार चलाइएको छ यस्तो शैलीले जनअपेक्षा पुरा हुँदैन् - www.khabardabali.com
January 24, Fri
जसरी पार्टी र सरकार चलाइएको छ यस्तो शैलीले जनअपेक्षा पुरा हुँदैन्
भदौ ५ गते, २०७६ - १५:२२
काठमाडाैं । सरकारको काम गराई र पार्टीको काम गराई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । यो पुरै भ्रदगोल स्थितिमा छ । ‘एक व्यक्ति एक पद’ जुन पार्टीभित्र बहसको विषय बनेको छ, यसले पार्टी र सरकार दुवैलाई गतिशिल बनाउँछ । यद्यपि ३/४ वटा जिम्मेवारी खापेर राख्ने कमरेडलाई त्यो पदमा बसिरहन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्ला । तर, त्यस्तो अवस्थामा कसैले पाएको जिम्मेवारी पनि पुरा गर्न नसक्ने अनि कतिपय साथीहरु क्रियाशिल नै हुन नपाउने स्थिति बन्छ । यसले पार्टीलाई गतिशिल बनाउने र जनअपेक्षा अनुसार काम गर्ने परिस्थिति निर्माण हुन सक्दैन् । प्रष्ट कुरा, कसैको दिन २४ घण्टाको हुने र कसैको ७२ घण्टाको हुने भन्ने हुँदैन् ।
अहिले पार्टी र सरकार ऐतिहासिक समयमा पनि छ । जनताको ठुलो अपेक्षा छ । हामीले आफैँभित्र सहि व्यवस्थापन गर्न सकेनौं भने जनअपेक्षा कसरी पुरा हुन्छ ?
तर यहाँ, आफुँलाई परेको बेलामा त्यसलाई गम्भिर ढंगबाट राख्ने र अर्कोलाई पर्दा वेवास्था गर्ने परिपाटी पनि हाम्रा नेताहरुमा विद्यमान छ । मबाटै त्यस्तो भूमिका हुन्छ भनेपनि त्याे गलत हो । पार्टीलाई कम्युनिष्ट अनुशासन र शैलीअनुसार लैजाने हो भने ‘एक व्यक्ति एक पद’को दायरालाई पनि स्वीकार गर्नुपर्छ ।
अहिले पार्टीमा भूमिका दिँदा पनि ठुलो भेदभाव गरिएको छ । केहि नेताले आफ्ना केहि अमुकलाई मात्रै च्याप्ने स्थिति बनाइएको छ । कमरेड माधवले कुरा उठाउँदै गर्दा पनि केहिको विषयमा मात्रै बोल्नु भएको छ । अन्य पीडित भएका थुप्रै साथीहरुको विषयमा उहाँ पुरै मौन हुनुभएको छ । आफ्नो अनुकुलतामा बोल्ने परिस्थिति नभई मान्यताका आधारमा बोल्ने परिपाटी आवश्यक देखिन्छ । हामीमा पद्धतिलाई स्वीकार गर्ने परिपाटीको अझै विकास भएकाे छैन् ।
भदौ ५ गते, २०७६ - १५:२२ मा प्रकाशित
खनाल फकाउँदै ओली, वामदेवको उपाध्यक्ष पद खतरामा !
काठमाडौं । नेकपाका नेता तथा संगठन विभागका प्रमुख वामदेव गौतमको भैंसेपाटीस्थित निवासमा पार्टीका अध्यक्ष...
एमसीसीका अमिल्दा बुँदा सच्चाएर अनुमोदन गर्दा समस्या हुन्न : डा. सुर्यराज आचार्य
काठमाडौं । साझा पार्टी नेपालका प्रवक्ता एंव पूर्वाधारविद् डा. सुर्यराज आचार्यले एमसीसीका केहि अमिल्दा...
अमेरिकी अर्बपतिको प्रस्ताव : तानाशाहीविरुद्ध लड्नेलाई म १ अरब पैसा दिन्छु !
काठमाडौं । स्वीजरल्याण्डको डाबोसमा चलिरहेको वल्र्ड इकोनोमिक फोरममा एक अमेरिकी अर्बपतिले अनौठो प्रस्ताव...
१५ वर्ष पुराना तीन पाङ्ग्रे सवारी साधन विस्थापन गर्ने निर्णय
सेवा मापदण्डमा दैलेख अस्पताल देशकै दोस्रो
काभ्रेको पाँचखालमा भेटिएको ‘स्तम्भ’ प्राचीन भएको पुष्टी
आजदेखि बाग्मती प्रदेशमा शहीद सप्ताह शुरु
नेपालगञ्ज विमानस्थलमा विहीबारदेखि सहायता कक्ष सञ्चालन
कोरोनाभाइरस : हामी कति चिन्तित हुनु पर्छ